लिम्वूवान - विविध सामग्री: देहव्यापार-यात्रा पूर्वसोभियत देखि भारतसम्म
देहव्यापार-यात्रा पूर्वसोभियत देखि भारतसम्म
दिल्लीको एक कफी हाउस ।
भित्तामा टाँगिएको छ एउटा पेन्टिङ ।
२२ वर्षीया लोला एक तमासले हेरिरहेकी छिन् ।
उनी कला बुझ्दिनन् । त्यसमाथि अमूर्त कला !
उदास छन् उनका आँखा ।
आकर्षक छिन् लोला । गोरी छिन् । अग्ली पनि ।
टिमिक्क गुलाबी सर्ट र खरानी रंगको छोटो स्कर्ट लगाएकी छिन् । चम्किलो र रातो हाइहिलमा छिन् ।
उनका दुवै हातका औँलामा सजिएका छन् रंगीबिरंगी औँठी । नङको पालिसको रंग उडेको छ ।
उज्बेकिस्तानकी नागरिक हुन् लोला । कामको खोजीमा सन् २००९ को नोभेम्बरको मध्यतिर दिल्ली आएकी हुन् । उनको ब्वाइफ्रेन्ड उनलाई भेट्न वेलावेला आइरहन्छन् ।
दुवैलाई थाहा छ- उनीहरू जिन्दगीमा के चाहन्छन् ?
पैसा, पैसा र पैसा !
किनभने, उज्बेकिस्तानको आफ्नो सहर तासकन्दमा उनीहरू एउटा घर किन्न चाहन्छन् । बिहे गर्न चाहन्छन् । सुखपूर्वक गृहस्थी चलाउन चाहन्छन् ।
गरिबीमा हुर्केकी हुन्- लोला । उनीबाहेक अरू चार भाइबहिनी छन् । आमा बितिसकिन् । बाउ छन् । छोराछोरीलाई गालीगलौज गर्नु उनको नित्यकर्म भएको छ ।
लोलाका लागि देहव्यापार आकर्षक रोजगारी हो । उनलाई यसमा कुनै पछुतो छैन ।
ब्वाइफ्रेन्डप्रति आभारी छिन् लोला । 'उसले मेरा लागि कति दौडधुप गर्‍यो ! उसले दिल्ली आउन मलाई आवश्यक पर्ने सबै कागजपत्रको व्यवस्था गरिदियो ।'
लोला एक्ली छैनन् । गोरी वेश्याहरूको फौजको एक हिस्सा हुन् उनी । भारतको राजधानी दिल्लीमा मात्रै उनीजस्ता युवतीको संख्या तीन हजार बढी छ । अरू ठूला सहरमा पनि छन् उनीहरू ।
दुबईमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव परेपछि पूर्वसोभियत संघका युवतीहरू देहव्यापारका लागि भारत आउन थाले । आइरहेका छन् । दिन दुईगुणा, रात चौगुणा आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहेको भारतलाई उनीहरूले केन्द्र बनाए । वेश्यावृत्तिका लागि भारत उहिल्यैदेखि उर्वरभूमि हुँदै हो ।
युक्रेन, जर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, चेचेन्या र किर्गिस्तानका महिला देहव्यापारका लागि भारत आउन थालेका छन् ।
भारतीय वेश्याभन्दा उनीहरू ४० प्रतिशत बढी पैसा लिन्छन् ।
किनभने उनीहरू धेरै 'प्रोफेसनल' छन् । र, भारतीय बजारमा प्रचलित देहव्यापारको काइदा र नियममा परिवर्तन ल्याइरहेका छन् ।
भारतीय पुरुष गोरो छाला भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् । उन्मुक्त सेक्सको आनन्द लिन लालायित छन् उनीहरू । स्वदेशी वेश्याहरूको परम्परागत सेवाभन्दा यी विदेशी गोरी वेश्याहरूको बिल्कुल भिन्न र नौलो सेवाको स्वाद लिन जति पनि खर्च गर्न तयार हुन्छन् हुनेखाने सहरिया ।
युक्रेन, जर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, चेचेन्या र किर्गिस्तानका महिला देहव्यापारका लागि भारत आउन थालेका छन् । भारतीय वेश्याभन्दा उनीहरू ४० प्रतिशत बढी पैसा लिन्छन् । भारतीय पुरुष गोरो छाला भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् । उन्मुक्त सेक्सको आनन्द लिन लालायित छन् उनीहरू । स्वदेशी वेश्याहरूको परम्परागत सेवाभन्दा यी विदेशी गोरी वेश्याहरूको बिल्कुल भिन्न र नौलो सेवाको स्वाद लिन जति पनि खर्च गर्न तयार हुन्छन् हुनेखाने सहरिया भारतीय ।
ब्वाइपmेन्डप्रति आभारी छिन् लोला । 'उसले मेरा लागि कति दौडधुप गर्‍यो ! उसले दिल्ली आउन मलाई आवश्यक पर्ने सबै कागजपत्रको व्यवस्था गरिदियो ।'
सोभियत संघको विघटनपछि उज्बेकिस्तान, जर्जिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तानलगायत देशका महिला देहव्यापारका लागि दुबई जान थाले । यो क्रम बेस्कन बढ्यो र दुबई वेश्यावृत्तिको अड्डा बन्यो । तर, सन् २००७ मा दुबईमा कमनवेल्थ देशका २ सय ४० वेश्या पक्राउ परेपछि वेश्यावृत्तिको अड्डामा भुइँचालो गयो । अझ, २००९ मेमा २ हजार ७ सय बढी वेश्यालाई दुबई पुलिसले समातेपछि त्यहाँको वेश्यावृत्तिको संसारमा प्रलय नै आयो । यसलगत्तै, यौन पर्यटकका तीर्थस्थलजस्तो थाइल्यान्डले २ सय २८ उज्बेक वेश्यालाई उनीहरूको देश फिर्ता पठाइदिएपछि पूर्वसोभियत संघका वेश्याहरू रोजीरोटीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्न बाध्य भए । र, उनीहरूले दक्षिण दिशातिरको यात्रा सुरु गरे । अर्थात्, उनीहरू आए भारत । आर्थिक मन्दीले यसक्रमलाई अरू तीव्र बनायो ।
दुबई पुलिसको हातबाट उम्किन सफल भइन्- उज्बेकिस्तानकी नगिना । तर, उनका केही सहेली भने उम्किन सकेनन् । उनीहरू जेलमा छन् अहिले । नगिना भने दिल्ली आइपुगेकी छिन् ।
'हामीहरूका लागि दुबई बस्नलायक ठाउँ रहेन अब,' नगिना भन्छिन् ।
उनी ग्राहक खोज्न बारमा जान रुचाउँदिनन् । उनी प्रस्ट छिन्, 'यो इस्लामविरोधी काम हो ।'
अनि वेश्यावृत्ति नि ?
'पुरुषलाई हाम्रो सेवा आवश्यक छ, र हामी उनीहरूलाई सेवा प्रदान गर्छां,' नगिनाको जवाफ छ ।
अर्की गोरी वेश्या रोमा पनि उज्बेकिस्तानकै हुन् । हिंस्रक स्वभावका बाबुबाट आजित भएर उनले घर छाडेकी थिइन् । र, वेश्या बनिन् । पछि, उनी दुबई पुगिन् ।
रोमा यस धन्दामा लागेको आठ वर्ष भइसकेको छ । एकप्रकारले उनी उस्ताद बनिसकिन् । देहव्यापारको सम्पूर्ण व्याकरण उनलाई कण्ठस्थ छ । भारतमा उनको यो तेस्रोपटकको बसाइ हो ।
दिल्लीको एक सानदार फ्ल्याटमा बस्छिन् उनी । सेक्रेटरी पनि राखेकी छिन् उनले ।
'सबभन्दा राम्रो काम गर्ने मात्रै यस धन्दामा टिक्न सक्छन्,' उनको अनुभव बोल्छ, 'हामी बाहिरबाट आएका वेश्यालाई राम्रो सेवा दिनुपर्ने दबाब रहन्छ । मलाई अंग्रेजी बोल्न आउँछ । म खुसी छु, जीवनप्रति कुनै गुनासो छैन ।'
'रात्रि पुतली'को विशेषण पाएका लोला, नगिना र रोमाजस्ता युवतीका लागि दुबई गरिखाने भाँडो नरहेपछि उनीहरू भारत आएका छन् । प्रत्येक दिन उनीहरू दर्जनौँ अखबारमा वर्गीकृत विज्ञापन दिइरहेका हुन्छन् । यी विज्ञापनमा मोबाइल नम्बर दिइएका हुन्छन् । यिनमा देहव्यापारको अत्यन्त चलाखीसाथ संकेत गरिएको हुन्छ । जस्तो, 'शरीर मालिसको पूर्ण सन्तुष्टि ।'
पूर्वसोभियत संघका यी गोरी देहव्यापारीहरूलाई भारतका प्रमुख सहर दिल्ली, हैदरावाद, इन्दौर, अहमदावाद, राजकोट जहीँतहीँ देख्न सकिन्छ । पाँचतारे होटेलमा, कुलीन वर्गका क्लब या फार्म हाउसमा ।
उनीहरू तीनदेखि ६ महिनाको पर्यटक भिसामा भारत आउँछन् र 'आन्टी'हरूसँग बस्छन् ।
आन्टी अर्थात् पूर्वसोभियत संघका उमेर ढल्केका महिला । आन्टीहरू वर्षौसम्म गैरकानुनी रूपमा भारत बसिरहेका हुन्छन् । र, उता र यताका दलाल बीचमा बसेर मध्यस्थकर्ताको काम गरिरहेका हुन्छन् । यस धन्दामा उनीहरूको खास भूमिका हुन्छ । मोटो शरीर भएका, हरबखत चुरोटको धुवाँ उडाइरहने यी आन्टीका भिसा एजेन्ट र पुलिससँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ । गोरी वेश्याका विघ्नहर्ता हुन्छन् उनीहरू । आन्टीहरूले वेश्याहरूबाट राम्रो आम्दानी गर्छन् ।
भारतीय दलाल यी गोरी विदेशी वेश्याहरूलाई दैनिक पारिश्रमिक दिएर राख्छन् । सुन्दर र चलाख वेश्याले दिनको १५ हजार भारुसम्म कमाउन सक्छन् । केही वेश्याले आफ्नो आम्दानीलाई मुनाफादायी कारोबारमा लगानीसमेत गर्ने गर्छन् । छालाका वस्तु निर्यात यस्तै एउटा कारोबार हो ।
विज्ञापनमा दिइएको फोन नम्बरमा फोन गरियो भने उताबाट पुरुष आवाज (दलाल)ले फोन उठाउँछ । उसले ग्राहकलाई विश्वस्त तुल्याउँछ, 'उसले (गोरी वेश्याले) तपाईंका हरेक चाहना पूरा गरिदिनेछ ।'
उसले 'प्रशिक्षित सेवा' भन्यो भने त्यसको मतलब हुन्छ- ग्राहकले आफ्ना सारा फ्यान्टासीको आनन्द पाउनेछ । केही दलाल त 'विश्वस्तरीय सेवा'को आश्वासनसमेत दिन्छन् ।
अनि, केही दलाल ग्राहकसँग गजलकारको शैलीमा बोलिरहेका हुन्छन्, 'हाम्रो मस्त मालिसको भर्‍याङ चढेर स्वर्ग पुग्नुहोस्, जहाँ शरीर र आत्मा चरम सुख प्राप्त गरेर एक हुन्छन् ।'
हिजो जसलाई दलाल भनिन्थ्यो, आज उसलाई एजेन्ट भनिन्छ । एकजना एजेन्टसँग ६ जनाजति गोरी वेश्या हुन्छन् । एजेन्ट ग्राहकसँग भेट्न चाहँदैन । सबै कुरा फोनबाट तय गरिन्छ, वेश्याको मूल्य, ग्राहकले पाउने सेवाका विवरण आदि ।
अधिकांश वेश्याका हातमा पैसा पर्दैनन् । दैनिक गुजारा चलाउने पैसाबाहेक । उनीहरू एक अनौपचारिक अनुबन्धका अधिनमा रहेर काम गर्छन् । जसअनुसार, उनीहरूले कमाएको रकम सीधै उनीहरूको देशमा, उनीहरूको परिवारमा पुग्ने गर्छ । र, यसरी आफू र आफ्ना परिवारका दुःख निवारण गर्न गर्छन् उनीहरू ।
Posted by limbu at 5:59 AM
कविता लेखन र आजीवन प्रतिपक्षमा कवि
आदिवासी जनजाती महिला अधिकारको सन्दर्भ
जानुका थोप्रा र गणेश तामाङलार्इ हार्दिक वधाई
एचके नेपाल हेयर सेलुन हंगकंग
'डन’ आतंकको चिरफार